Mahajanga: nahavita fotodrafitr’asa fanamainana diky ny tanàna | Région Boeny
Notanterahina ny talata 04 aprily 2017 tao amin’ny Lapan’ny tanànan’i Mahajanga ny fikaonan-doha famaranana ny tetik’asa Fanadiovana eto Mahajanga na ASSMA (Assainissement à Mahajanga).
Ny taona 2013 no nanombohana ny tetik’asa ASSMA teto Mahajanga. Ny Vondrona Eropenana no mpamatsy vola azy ary ny fiaraha-miasan’ny Komina Ambonivotr’I Mahajanga sy ny IRCOD (Institut Régional de COopération Développement) kosa no nanatosana ireo programan’asa rehetra tao anatiny.
Ny resaka fanadiovana sy fidiovana no tena votoatin’ny tetik’asa ASSMA ka mitotaly 378 ny kabone ho an’ny tokan-trano vitany teto an-tampon-tanànan’i Mahajanga nanomboka ny taona 2013 araka ny tatitry ny tompon’andrikitra.
Foto-drafitr’asa fanamainana ny dikin’olombelona ho fanampin-jezika
Ankoatra ireo dia notokanana androany ny foto-drafitr’asa, mitentina 900 000 euros, fanamainana ny dikin’olombelona na STVBM (Station de Traitement des Boues de Vidange de Mahajanga) eny Marohogo, kaomina Belobakan distrikan’i Mahajanga II. Tany 1ha eny amin’ny faritra fambolen-kazo (station forestière) no misy azy io. Aparitaka eo amin’ireo toerana voavoatra antsoina hoe lits de séchage ny diky avy noloarana isan-tokatrano. Mahazaka maro izy ireo satria miisa 15. Hamainina eo 15 andro, mitsika any amina koveta misy fantsona makarakara efa misy fanafody mamono ireo mikroba ny ranon-diky ary mietona ho maina ao.
Ireo diky maina eny amin’ny lits de séchage kosa dia ampiasaina ho fanampin-jezika (co-compostage) ilaina amin’ny fambolena rehetra. Ny orin’asa malagasy Madacomposts, izay efa mpanodina ireo fako ho zezika eny Mangatokana Mahajanga no nandray ny fitantanana io STBVM io, ary hampivady ireo zezika diky amin’ny zezi-pako, ary mivarotra izany.
Fiarabe fitanterana maloto (camion hydrocureur)
Notolorana ny fiarabe iray hitanterana ireo maloto ho eny amin’ny STBVM ny Madacomposts izay narahina fanaovan-tsonia ny fifanarahana ny fitantanana nifanaovan’ny solotenan’ny mpamatsy vola ny Ben’ny tanànan’ny Mahajanga sy Belobaka ary ny Madacompost.
Afaka miantso io fiarabe io any ampitantana avokoa ny rehetra manerana ny faritra Boeny. Ka 190 000ar isaky ny maloto 1m3 loarana ho an’ny orin’asa sy hotely, 90 000ar ho an’ny tanàna mana-katao, ary 60 000ar ho an’ireo ambany tanàna.
Fitokanana lalàna mirefy 300 metatra nasiam-panavaozana ka norakofana simenitra matevina (béton) tao amin’ny fokontany Tsararano Ambany, Mahajanga no nanamarihana ny fikatonan’ny ny tetik’asa ASSMA io talata 04 avrily 2017 io.
Nanatrika feno ireo fotoana ireo ny manam-pahefana ara-panjakana rehetra teto Mahajanga, anisan’izany ny lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, izay nilasa fa ny fanadiovana sy fidiovana dia taratry ny fahambonin-tsain’ny olombelona ( vf:…l’assainissement , c’est une question de dignité humaine…) ka tsy nisalasala izy naneho ny fahafaham-pony amin’izao zava-bitan’ny fiaraha-miasan’ny kaomina ambonivohitr’i Mahajanga niaraka tamin’ny Vondrona Eropeana izao. Ity farany izay nandefa solotena ihany koa, dia Atoa Leemans Tom.